Adixin Myanmar - CSR
ASX-Racing ASX-Sporty C200-Racing Dake R1-Racing Tricker Z1000-N19
Dynamic Dynasty Fizo Qbix Queen Scotter
Circular Delivery Bike Force Ramer Run-R1 Spine
CZ-Zeniz Desire RRave Smasher Walfa
Diesel Generator Gasoline Generator Mini Tricycle
Accessories Cover Engine Light Metal Replacement Sticker
Blog Vlog CSR
Adixin Vehicle Group Co.,Ltd.
Oxygen အလှူငွေ ...
မန္တလေး မီးသတ်ဦးစီးဌာန အတွက် နိုင်လွန် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် လှူဒါန်းမှု
မီးသတ်ဦးစီးဌာန လှူဒါန်းမှု ...
ကျောင်းသားများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရေမော်တာ ရေမြုပ်မော်တာ ကားအမိုးနှင့် ကားကြမ်းခင်ပစ္စည်းများ
စေတနာ ထက်သန်စွာဖြင့် ကာလတန်ဖိုး (၇၀၀၀၀၀/-)လှူဒါန်းမှု ...
လူငယ်သင်တန်းကျောင်း လှူဒါန်းမှု (1-2-2019)
အော်တိုရေပန့် နှင့် ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှု (1-2-2019) ...
November 9-2020 " မယ်ရွှေဥ " သခင်မတောင် ပေါ် အလင်းလှူဒါန်းသည့် ကုသိုလ် ။
ည အချိန် ဆို " လ " အလင်းသာ အားကိုးပြီး တပါးတည်း သီတင်းသုံးနေသော ဘုန်းဘုန်း အတွင်း လျှပ်စစ်မီး လှူဒါန်းပေးလိုက်တာပါ ။ ...
ADIXIN မိသားစု ကြီး ကုသိုလ် အထူးပွဲ ပြုလုပ် ကျင်းပ တဲ့ November လ ရောက်တိုင်း သာသနာ ဘောင် ဝင်ကြတဲ့ မြင်ကွင်းလေး များ ။
ပါပါး ၊ အကိုကြီး ၊ အိမ်သား ၊ အိမ်သား ညီ ၊ တူလေး ၊ ဦးလေး ၊ ဆွေမျိုး စပ်မျိုး နှင့် ဝန်ထမ်းများ .. အမြဲ ဘုန်းကြီးဝတ် ၊ သီလရှင် ဝတ် ပေးသော သာသနာ့ ဘောင်သွပ်သွင်း အလှူတော် မဂ်လာ ။ ...
May 30-2016 " စီးတော် ယာဥ် " လှူဒါန်း ခြင်း မဂ်လာ ။
မန္တလေး မြို့ ၊ မန္တလေး တောင်တက် ကားလမ်း တွင် တည်ရှိသော " ပြည်ဧချောင် " သီလ ရှင် စာသင်တိုက် သည် မန္တလေး တောင်ပေါ် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ် ရသေ့ကြီး " ဦးခန္တီ " ဆောက်လုပ် ပေးခဲ့ရာ နှစ်ပေါင်း တရာကျော် တိုင် ရှိလေပြီ။ သီလ ဂုဏ် ၊ သမာဓိ ဂုဏ် ၊ ပညာ ဂုဏ် ပြည့်စုံတော်မူသော သီလရှင် ကြီး ဒေါ်နန္ဒာ သီရိ ( အဂ္ဂ မဟာ ဂန္တဝါစက ပဏ္ဍိတ ) မှ ပရိယတ္တိ စာပေများ သင်ကြားပို့ချ လျက်ရှိသည် ။ ရိုးသား အေးချမ်းပြီး စည်းကမ်း ကောင်းတဲ့ ဆရာကြီးကျောင်း တွင် သွားရေး လာရေး မခက်ခဲ ရလေအောင် မော်တော်ကားတစီး လှူဒါန်း ပေးလိုက်ပြီး ၊ ကား ထားရန် ကားဂိုထောင် ပါ ဆောက်လုပ် လှူဒါန်း ပေးခဲ့သည် ။ ...
November 10-2015 မိဘမဲ့ လမ်းဘေးနေ များ အား " တနိုင် ကူညီ " ဒါန ပြုသည် ။
ဘဝ ရဲ့ လောကဓံ ကို အရွယ် နဲ့ မမျှ ရုန်းကန် နေရရှာသော အရွယ်စုံ လူသားများအား တနေ့စာ ကုသိုလ် ပြုပေး လိုက်သည် ။ ...
November 23-2018 " နရသီဟပတေ့ " ဘုရား အတွင်း စကြန် ပတ်လမ်း ၊ သဲ ကျောက်ပြား ခင်း ၊ ဘုရား လေးဆူ ရောင်တော်ဖွင့် ခြင်း ကုသိုလ် ။
ပုဂံ မြို့ ၊ မင်းနန်သူ ရွာ ရှိ " နရသီဟပတေ့ " ဘုရားကြီးအား ဘတ်စုံ ပြုပြင် ပြန်လည် ရောင်တော် ဖွင့် လိုက်သည် ။ ...
11.11.2013 " နရသီဟပတေ့ " ဘုရား ရေပိတ်လွှာ လောင်း ၊ လမ်းလျှောက် သဲ ကျောက်ပြား ခင်း ခြင်း နှင့် ဘုရားကြီး အား ရောင်တော်ဖွင့် ၊ အနေကဇာတင် ၊ ဆွမ်း သပိတ် သွပ် သော ကုသိုလ် ။
ပုဂံ မြို့ ၊ မင်းနန်သူ ရွာ တွင် " တရုတ် ပြေး " ဘုရား ဟု မူလ ခေါ်ဆို သည် ။ ပြည်တွင်း ခရီးသွား များ အလွန် အရောက်အပေါက်နည်း သော ဘုရားတွင် ADIXIN မိသားစု မှ သပ္ပာယ် ကြည်ညို ဖွယ်ဖြစ်လာ အောင် ထိ ဘတ်စုံ ပြန်လည် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ပေးခဲ့သည် ။ ...
November 15-2017 ရပ်ကွက် လမ်း ခင်း သော ကုသိုလ် ။
မန္တလေး မြို့ ၊ ရွှေကျင် ကွက်သစ် တွင် မိုးတွင်း အခါ ၌ သွားလာရ ခက်ခဲသော ရပ်ကွက်လမ်း ကို " တနိုင် ကူညီ " ခင်းပေး လိုက်သည် ။ ...
May 20-2017 " " ပိုင် ဧကရီ -၂ " စက်ရေတွင်း အလှူ မဂ်လာ ။
မကွေး တိုင်း ၊ နတ်မောက် မြို့နယ် ၊ လင်းကတိုး ကျေးရွာ တွင် ရှိနေသော ရေတွင်း မှာ ပျက်စီး ယိုယွင်း နေပါသောကြောဂ့် ADIXIN မိသားစု မှ " ရေလှောင် ကန်သစ် ၊ အင်ဂျင် စက် နှင့် ရေမြှုတ် မော်တာ " တို့ကို ထပ်မံ လှူဒါန်း ပေးခဲ့သည် ။ ...
May 20 -2015 " ပိုင် ဧကရီ " စက်ရေတွင်း ရေစက်ချ မလှူ ။
မကွေး တိုင်း ၊ နတ်မောက် မြို့နယ် ၊ လင်းကတိုး ကျေးရွာ နေ မိဘပြည်သူများ နေ့စဥ် ကြုံတွေ့ နေရသော " သောက်ရေ သုံးရေ " အခက်အခဲ ပြသာနာများ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာ စေရန် ရေတူးဖော် ၊ ရေကန် တည် ၊ မီးစက် နှင့် ရေမြှုတ် မော်တာ အပါအဝင် " လင်ကတိုး ရွာမြေ " ဝယ်၍ စက်ရေတွင်း လှူဒါန်းပေး လိုက်သည် ။ ...
June 5-2020 " တေမိယ " တွင်းတော် နတ်ရေကန် အလှူ ။
ပြည် ဘက်က ... ရွှေတောင် မြို့နယ် .. တွင်းတော် ရွာ က ... ၂၅ ပေ ပတ်လည် ရှိတဲ့ “ သေ( တေ ) မိ တွင်း “... စ ပြုပြင် နေပါပြီ။ ရှေးရှေး တုန်းက မင်းမိန့် မင်းအာဏာ မင်းသစ္စာတွေ နဲ့ တည် ခဲ့သော ... စကား မပြောတတ်တဲ့ ဆွံ့အ နေတဲ့သူ ကို , ဒီ သေ( တေ )မိ တွင်း ထဲ ခဏ ဆင်းခိုင်းရင် .. ပြန်တက် လာတဲ့ အခါ .. စကား နဲနဲ ဆီ စ ပြော လာတဲ့ ရာဇဝင် ရှိလို့ လေ .... ဤ ကုသိုလ် ကောင်းမှု့ ကြောင့် .. ဆွံ့အ ဒုက္ခ ခံစားနေရ ရှာတဲ့ သူများ ဝဋ်ကြွေး ကျေ၍, သုခ ပြည့်စုံ ကြရပါစေ ... ...
April 17-2016 " လေးထောင့်ကန် " ကျောင်း မီးစက်ခန်း နှင့် ကျောင်းတွင်းသုံး စတီး ပစ္စည်းများ အလှူ ။
မန္တလေး တိုင်း ၊ ပုဂံ မြို့ ၊ " လေးထောင့်ကန် " တောရ ကျောင်း တွင် လိုအပ်နေသော အရာများ " တနိုင် ကူညီ " လှူဒါန်းသည် ။ ...
November 10-2019 " ပါမောက္ခ " ကျောင်းတိုက် ဘုရားခန်း နှင့်ကြမ်းခင်း ရေစက်ချ အလှူတော် ။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ယင်းမာပင် ခရိုင် ၊ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ် ၊ ကန္နီ ကျေးရွာ တွင် တရား ရိပ်သာ အတွက် လိုအပ် လျက်ရှိသောကြောင့် လှူဒါန်း ကုသိုလ် ပြုသည် ။ ...
11.11.2019 " ဘောဇန သာလာ " ဆွမ်းချက်ဆောင် ရေစက်ချ မဂ်လာ ။
မန္တလေး တိုင်း ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ၊ ဂွေးချို ကျေးရွာ ၊ မဂ်လာ ဘုံကျောင်း တွင် လေလုံ မိုးလုံ ၊ အမှိုက်သရိုက် များ ဆွမ်းဟင်း ထဲ မကျရောက် ရလေအောင် ဆွမ်းချက်ဆောင် သစ် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ...
11.11.2019 " မဟာစည် " ကျောင်းတိုက် ရှိ " ဇမ္ဗူအေး " သာသနာ ဗိမာန်တော် ကြမ်းခင်း အလှူတော် ။
မန္တလေး တိုင်း ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ၊ ဂွေးချို ကျေးရွာတွင် စာသင် စာချ သာသနာ အားထုတ်နေကြသော သံဃာတော် များ အတွက် လှူဒါန်း သည် ။ ...
1.1.2015 ပေ ၃၀ * ၉၀ RC " ပိုင် ဧကရီ " စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ရေစက်ချ အလှူ ။
မန္တလေး တိုင်း ၊ တောင်သာ မြို့နယ် ၊ တွင်းများ ရွာ ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းနေ အရွယ်များ ဆက်၍ အထက်တန်း ပညာ သင်နိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်နေသော စာသင်ကျောင်းဆောင် သစ် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်း ပေးခဲ့သည် ။ ...
November 13-2016 " အသောကာ ရာမ " တိုင်ရင်းသား မိဘမဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး သင် ပညာရေးကျောင်း အတွက် အမိုး ၊ အကာ ၊ တံခါး များ ရေစက်ချ အလှူ ။
မန္တလေး တိုင်း ၊ မလှိုင် မြို့နယ် ၊ ကျောက်တန်း စံပြကျေးရွာ ရှိ " အသောကာရာမ " ကျောင်းတွင် မိဘမဲ့လေးများ လုံလုံခြုံခြုံ နွေးနွေးထွေးထွေး ပညာ သင်နိုင်ရေး အတွက် " တနိုင် ကူညီ " လှူဒါန်းသည် ။ ...
November 27-2017 " တာမဏီ အုတ်ကျောင်း " ကျောင်းဆောင်သစ် ရေစက်ချ အလှူ ။
ပုဂံ မြို့ - ဆရာတော် အရှင် ကုမာရ ( ဓမ္မ ကထိက ကမ္မဌာနာ စရိယ ) သီတင်းသုံး ရန် အတွက် " တာမဏီ အုန်ကျောင်း " ကျောင်းဆောင်သစ် ။ ...
November 24-2018 သမိုင်းဝင် " ရွှေအင်းတိန် " ဘုရား ပြုပြင် မွမ်းမံ အလှူတော် ။
ရှမ်းပြည်နယ် ၊ အင်းလေး- ညောင်ရွှေ မြို့ ၊ " ရွှေအင်းတိန် ဘုရား အရံစေတီ အမှတ် ( ၉၁၆ ) အား ပြုပြင် မွမ်းမံ ပြီးစီး၍ ရေစက်ချ မဂ်လာ အလှူတော် ။ ...
11.11.2017 စတုတ္ထ အဆူ ထီးတော်တင် ခြင်း နှင့် " သိမ် " လှူဒါန်းခြင်း ။
မကွေး တိုင်း ၊ ချောက် မြို့နယ် ၊ သြဇာတော ကျေးရွာ ၊ ကန်နီ ကျောင်းတိုက် အတွင်း ရှိ " သံဃ သာမဂ္ဂီ " သိမ် အသစ် ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ရွှေထီးတော် တင်ခြင်း ၊ ဗုဒ္ဓ ဆင်းထုတော် ၊ စေတီရင်ပြင် ကြွေပြား ခင်းခြင်း ကုသိုလ် ။ ...
11.11.2016 တတိယ အဆူမြောက် ထီးတော်တင် သည့် " စနေနံ " စေတီ
11.11.2016 မန္တလေး တိုင်း ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ၊ ဂွေးချို ကျေးရွာ ၊ မဂ်လာ ဘုံကျောင်း ... ...
November 19 , 2015 ဒုတိယ အဆူမြောက် မဟာ အတုလ မြတ်မုနိ " မယ်ရွှေဥ " စေတီတော် ထီးတော်တင် ၊ အာရုံခံ အဆောက်အဦး ၊ တံခွန်တိုင် ရေစက်ချ ။
ဒုတိယ အဆူမြောက် မဟာ အတုလ မြတ်မုနိ " မယ်ရွှေဥ " စေတီတော် ထီးတော်တင် ၊ အာရုံခံ အဆောက်အဦး ၊ တံခွန်တိုင် ရေစက်ချ ။ ...
April 8 , 2015 ပထမ အဆူ ထီးတော်တင် သော " ကံမြင့်ကံတင့် " ရွှေဘုံသာ ဆုတောင်းပြည့် စေတီတော် ။
မန္တလေး တိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ် ၊ အိုင်ကြီး ကျေးရွာတွင် " မင်းရှင်စော " တည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူခဲ့သော " ကံမြင့်ကံတင့် " စေတီတော် မြတ်ကြီး ဗုဒ္ဓ ဘိသေက ဘုရား အနေကဇာ တင် ၊ ရွှေထီးတော် အထွဋ်တင် မဂ်လာ ။ ...
မန်းလေးတောင် မြောက်ဘက်တက်လမ်း မုဒ်ဦး တံတိုင်း နှင့် စတီးတံခါး
မန်းလေးတောင် မြောက်ဘက်တက်လမ်း မုဒ်ဦး တံတိုင်း နှင့် စတီးတံခါး ...
မိဘမဲ့ကလေးများ အတွက် ဒါနကုသိုလ်
ဘုံပျံတောရကျောင်းမှာ မိဘမဲ့ကလေးများ အတွက် ဒါနကုသိုလ် ...
မန္တလေးတောင်တော် မြောက်ဘက်စောင်းတန်း မရွှေဥ နတ်နန်းထိပ်ရှိ မုခ်ဦး၊ အုတ်တံတိုင်း၊ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် စတီးတံခါး တပ်ဆင်ခြင်
"ADIXIN" ဆိုင်ကယ် မိသားစုတို့မှ အလှုတော်ငွေ "လေးဆယ်တစ်သိန်းကိုး‌ထောင်ကျပ်" တိတိအား လာရောက်လှူဒါန်းသွားပါသည်။ ...
ချဥ်ပြစ်ကျင်းရွာမှ မူလတန်းအလွန်ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် နိုင်လွန် ကုမ္ပဏီ မှ ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း လှူဒါန်း ...
ကဆုန်လပြည့်နေ့ လှူဒါန်းမှု ...
Covid 19 - ကာလ ဒါန , ကုသိုလ် ကောင်းမှု့ ။
ကာလ ဒါန , ကုသိုလ် ကောင်းမှု့ ။ ...
မန္တ​လေးလူငယ်သင်တန်း​ကျောင်းရှိ ​ကျောင်းသား​​လေးများအတွက် အလျား ၆၅​ပေ၊ အနံ ၂၃​ပေ၊ အမြင့် ၁၂​ပေရှိမိဘဧည့်​တွေ့​ဆောင် ...
နိုင်လွန် ကုမ္ပဏီ မှ (၁)လုံး လှူဒါန်း
စောင် ခြင်ထောင် အိပ်ယာခင်းများ လျှော်ရန်အတွက် အဝတ်လျှော်စက် ( ၂) လုံး ...
2020 @ Adixin Vehicle Group Co.,Ltd.
Developed By Future Sky IT Co.,Ltd.